बत्ती मुनीको अँध्यारोः सदरमुकामै दलित बस्तीकाे विजोग - Dalit Online
२४ श्रावण २०७५, बिहीबार २३:२५
गुल्मी– खेलेर करिव ४ वटा बाख्रा अटाउन सक्ने स–साना बाँसले बारेका झुपडीहरुमा बस्छन पाँच देखि सात जना सम्मका मानिसहरु । अविरल वर्षा भई रहेको छ । पुराना खिया लागेका जस्ता पाता प्वााल परेर पानी चुहिने गर्दछ । त्यसरी चुहिने पानीलाई कसैले थाल, डेक्सी थापेर भुँई चिसो हुनबाट जोगाउने प्रयास गरे पनि भँई हिलाम्मे छ । त्यो कुनै एक परिवारको मात्र होइन ११ घर परिवारको अवस्था उस्तै हो । यो धेरै टाढाको कुरा पनि होइन गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास कै हो ।
हाल रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्वर–८ जिल्लाको सवै भन्दा सुगम थलोका रुपमा लिइन्छ । त्यसै थलोमा बढि मात्रामा दलित र जनजाती बस्ती रहेको बुढीचौरमा हिँडेरै ५ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । त्यसको दायाँ पट्टि जंगलको काँखमा नाखेडाँडा भन्ने एउटा दलित बस्ती छ । जहाँ तिनै ११ वटा चुहिने झुपडीमा उनीहरु अटि नअटी बस्छन् ।
त्यहाँ सम्म पुग्ने मोटर बाटाको कुरा छौडौं , पैदल हिँड्ने बाटो समेत हिलाम्मे छ । कतै लेउ लागेर चिप्लीने डर छ । एक देखि अर्को झुपडीमा पुग्दा लड्न बाट जोगिन बढो होशियारी पुर्वक हिँड्नु पर्छ । कतिपयका गाई भैसी पाल्ने गोठ समेत छैनन् ।
ती प्रत्येक घरधुरीको चार डोका मकै फल्ने जमिन छैन । झुपडी वरीपरी मकै बारी देखियो । अरु गाउँमा मकैका घँुगा देख्दा रहर लाग्दा छन् तर उनीहरुको त्यो मकै वारी हेर्दा गतिलो घुँगा लाग्न सकेको देखिएन ।
हिलाम्मे झुपडीमा बस्न नसकेर बाहिर निस्केकी जुठी बिकले देखाउँदै भनिन–‘हेर्नुस त मेरो घरको यो हाल , भित्रै मुल फुटेर बाहिर निस्केर बसेका छम्।’ उनका चार भाई छोराहरु मध्ये कान्छा छोरा बुहारी संग बसेकी उनी । त्यसैमा भान्छा, विस्तरा त्यसैमा राखन धरन गरिन्छ ।
बाहिरबाट जाने सामान्य परिवारको मान्छेले समेत त्यो परिवार त्यस भित्र कसरी अट्लान भनेर अनुमान लगाउने गर्दछन् । त्यसको विकल्पमा त्यसै झुपडीमा मुनी बाँसले बारेर माटोले पोतेर कोठा बनाउने प्रयास गरिएको रहेछ तर पानीको मुल फुटेर वेहाल छ । जुन हिलाम्मे हुन नछाडे पछि उनका छोरा बुहारीले त्यसमा विस्तरा सार्न सकेका छैनन् ।
अरु तीन भाई छोरा बुहारी पनि त्यस्तै गोता काटेर बसेका छन् । विहान जुरुक्क उठ्ने र तल तम्घास बजारमा मजदुरी गर्न जाने उनीहरुको दैनिकी हो । त्यसो नगरे कसैको पनि चुलो बल्ने अवस्था छैन ।
बुढीचौरका वासिन्दा वसन्त भलामी भन्नुहुन्छ ‘ बत्तिमुनीको अँध्यारो भनेको यहि हो, दुरदराज गाउँका मानिसहरुको समेत आर्थिक अवस्था सुध्रिदै गएको बेला यसै सदरमुकाममा उनीहरुको आर्थिक अवस्था र चेतना स्तर समेत यति दयनीय छ । ’
उहाँले थप्नुभयो –‘उनीहरु यहाँका रैथाने हुन् । चुनावताका त्यस वस्तीमा नपुगेको कुनै दलका नेता कार्यकर्ता हुँदैनन् । त्यति बेला मुखका टुँडाले उनीहरु सवथोक पाउँछन् तर चुनाव सकिए पछि उनीहरुको अवस्था हिजो जे थियो त्यही रहँदै आएको छ । उनीहरुको यो अवस्था जस्ताको त्यस्तै नरहे सम्म राजनीति अन्त्य हुने देखेर हो कि उनीहरुलाई वास्ता गर्ने राजनैतिक दल देखिएन ।’
उहाँका अनुसार त्यस ११ घरधुरीमा १६ वर्ष माथिका कोही पनि सामान्य साक्षर समेत छैनन् । त्यस माथी विवाह भएकाहरुले मात्र सन्तानलाई पढाउन थालेका छन् । अशिक्षा पनि गरिवीको अर्को कारण भएको उहाँको ठम्याई छ ।
वरपर गरेर एउटा निम्न माध्यमिक विद्यालय त्यसै टोला चलाउन सकिने विद्यार्थी संख्या छन् । जहाँ अहिले सम्म एउटा प्राथमिक विद्यालय सम्म खोलिएको छैन । कारण तल बजारका ठुला विद्यालयहरुमा विद्यार्थी कम हुने भएकोले त्यहाँ विद्यालयको परिकल्पना गर्न समेत नरुचाउनेहरु भएको पनि कतिपयको ठम्याई छ ।
उनीहरु भन्दा माथी प्रशस्त बाँझो जमिन छ । राज्यले चाहे त्यस बाँझो जमिन उनीहरुलाई गरी खान पनि दिन सक्नु पर्ने हो । तर त्यो बस्ती बसोबासका लागि उपयुक्त छैन । विशाल रेसुङ्गा वन क्षेत्रको एउटा भाग हो त्यो ।
चुनावताका मेयर डिल्लीराज भुसाल पनि पुगेको त्यस समुदायले बताए । त्यस पछि भने उनी फर्केर गएका छैनन् । अरु दलका थुप्रै नेता कार्यकर्ता पनि हुलका हुल पुग्ने गरेको उनीहरुले बताए । वडाध्यक्ष भरत भलामी भने बेला बेलामा त्यहाँ पुगिरहनु हुन्छ । यस्तो कष्टकर बसाई देखेर थोरै मात्रमा भए पनि सम्वोधन गरौं भनेर उहाँले नगरपालिकाबाट जस्ता पाताका लागि सिफारिस गर्नुभयो । मेयर भुसालले सहर्ष तोक लगाउनुभयो ।
मंगलवार विहान त्यस टोलका विरबहादुर विकको घरमा थुपारिएका ३८ वटा जस्ता पाता वितरणको बेला हारालुछ थियो । कोही त लाखौंका राहत आए जस्तै गरेर हौसिदै थिए । ती पाताहरुलाई भाग लगाउँदै जाँदा शान्ति विकलाई दश पाता र अरुलाई पाँच पाँच पाता भन्दा बढि हुन सकेन ।
त्यसले सामान्य ओत त पुग्यो तर व्यवस्थित घरका लागि त्यो अत्यन्तै कम हो । उता पल्लो टोल बुढीचौरको पनि अवस्था कतिपयको त्यस्तै छ । कतिपय झुपडीमा जस्ता पाता चुहेर बोरा र त्रिपाल लगाई रहेका थिए ।
पाँच पाँच थान जस्ता पाता पाउने सुर्य विक, छविलाल विक, गनबहादुर विक, विष्णु विक पनि लाखौंको राहत आएझैंको गदगद्मा थिए । उनीहरु खुशीले गद्गद देखिए पनि वर्षायाममा मुल फुट्ने उनीहरुको वस्ती बसाईका लागि उपयुक्त हुने देखिदैन ।
सदरमुकामकै जनताको त्यो विजोग देख्दा जुन कुनै राजनैतिक दल प्रति त्यहाँ पुग्ने जो कोही सर्वसाधरणले घृणा गर्ने दृश्य आफै बोल्छ । त्यहाँ पुगेर प्रश्न गर्छन धेरै जना र भन्छन–‘अहिले सम्म त्यस क्षेत्रबाट सांसद जित्ने अहिलेका मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले के हेरे ? विचमा उनलाई हराएर कांग्रेसबाट सांसद जित्ने चन्द्र भण्डारीले के हेरे ?
वडाध्यक्ष भरत भलामी भन्नुहुन्छ –‘ त्यस बुढीचौर र उता बाँझीपोखरीका दलित वस्तीको आर्थिक, शैक्षिक अवस्था दयनिय देखेर उनीहरुलाई उकास्न गत वर्ष देखि त्यस वडा भित्रका प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा दलित समुदायका बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका छौं, उनीहरुको शैक्षिक सामग्रीका लागि ४ लाख छुट्टाएका छौं ।’
उहाँले थप्नुभयो –‘ म अहिले काठमाण्डौंमा भएकोले त्यहाँ पुग्न सकिन, आज जे जति जस्ता पाता वितरण गरियो , त्यसले पर्याप्त हुन्न , नगरपालिकाले दिएन भने नपुगलाई वडाको रकमबाट भए पनि छुट्टाईने छ । ’
निमित्त वडाध्यक्ष सीता अर्यालले त्यस वस्तीको अवस्था देख्दा करुणा जाग्ने गरेको तर वडा स्तरबाट मात्रै उनीहरुलाई सम्वोधन गर्न नसकिने भएकोले नगर, प्रदेश र केन्द्रको समेत ध्यान जानु पर्नेमा जोेड दिनुभयो । वडासदस्य नविन श्रेष्ठले बत्ति मुनीको अँध्यारो त्यस वस्तीमा सवैको ध्यान जान जरुरी भएको बताउनुभयो ।
वडा सचिव निर्मला रोकाका अनुसार बाँझी पोखराका त्यस्तै पिडीत जयकला कामी र सरस्वती विकलाई पनि क्रमशः १२ र १६ पाताका दरले जस्ता दिएर अहिले छाएर बसेका छन । त्यस नगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुरेशराज पन्थीका अनुसार खरका छानारहित नगर घोषणा कार्यक्रम अन्तरगत यस वर्ष १ सय ६७ बण्डल जस्तापाता गरिएको थियो ।
त्यस मध्ये हाल सम्म १ सय २१ बण्डल वितरण भई सकेको छ । विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्र्तगत टिनका छान भएका तर चुहिने छ भने त्यस्ता परिवारलाई वडाको सिफारिसमा मेयरले तोक लगाएर वितरण गर्ने गरिएको छ ।
प्रकाशित | २४ श्रावण २०७५, बिहीबार २३:२५